RASMI: Saddexda xiddig ee ku tartami doona abaal-marinta laacibka sanadka ee UEFA oo la shaaciyey… (Messi oo afaraad ka soo muuqday iyo CR7 oo…) – Gool FM
(Yurub) 23 Sebt 2020. Xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ayaa ku dhawaaqay liiska saddexda xiddig ee ku tartami doona Abaal-marinta laacibka sanadka ee UEFA.
Kevin de Bruyne, Robert Lewandowski iyo Manuel Neuer ayaa isagu soo haray tartanka abaal-marinta xiddiga sannadka ee UEFA 2020.
Laacibka khadka dhexe ee Kooxda Manchester City Kevin de Bruyne ayaa xiddigaha Champions League kula guuleystay ee Lewandowski iyo goolhaye Manuel Neuer kula tartamaya abaal-marintan.
Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo ayaa laga waayey saddexda sare ee isugu soo hartay tartankan inkastoo xiddiga reer Argentina uu ka soo muuqday kaalinta afaraad, iyadoo uu booskaas kala baxay Neymar.
Weeraryahanka uu hanashada badan abaal-marintan ee Cristiano Ronaldo ayaa kaalinta 10-aad laga tuuray.
Thomas Müller (6), Kylian Mbappé (7), Thiago Alcántara (8) iyo Joshua Kimmich (9) ayaa dhammaystiraya 10-ka sare.
Xiddiga reer Portugal ee CR7 ayaa abaal-marinta ku guuleystay saddex jeer tan iyo markii bixinteeda la bilaabay sanadkii 2011-kii, iyadoo uu Lionel Messi uu labo jeer ku guuleystay.